Ubhedu / iNickel Bronze
Sinezinto ezi-4 zokudityaniswa ngokudibeneyo kubandakanya iAluminiyam, iCopper, iBass kunye neNickel castling -Ourries zethu ikakhulu zivelisa iAluminiyam, iimveliso zempompo ezisekwe kubhedu, kunye nezinye izinto ezenziwe ngobhedu, kunye nemveliso yonyaka emalunga neetoni ezingama-400. -Ubunzima bemveliso bunokuba yi-0.05-100kg, obona bungakanani obukhulu yi-800 * 800. Ngokweemfuno, izinto zinokuhlangabezana neemfuno zovavanyo ze-ROHS, kunye nokuchaneka kweemveliso zokuphosa kunokufikelela kwi-CT7-CT8. Nge spectrometer, izinto ezinokuthi b ...
Iimveliso zethu ziveliswa ngomgangatho ophezulu ngokusebenzisa izinto ezinokuthenjwa, ubuchwephesha obutsha, izixhobo eziphezulu zoomatshini kunye nolawulo ngokungqongqo lwenkqubo. Njengenkampani enye ekhokelayo kwicandelo lokuphosa ngokuchanekileyo, -senza ngezi zinto zilandelayo: GB (CHINA), ASTM (US), DIN (GERMANY), JIS (JAPAN): 304.304l, 316,316l, 410, cf8.cf3, cf8m, 1.4301,1,4303, .4308,1.4404,1.4408,1.4581, SCS13, SCS14, SCS13A, SCS14A, WCB, C45, C20, C10, 15Cr3,15CrNi6,16MnCr5,34CrMo4,42CrMo4, 66, MVRMo4,56 A3 ...
I-Hebei Metals & Engineering Products Company Ltd. yasekwa ngo-1974 yaze yahlengahlengiswa ukusuka kwishishini likarhulumente ukuya kwishishini labucala ngo-2005. Ngama-Foundries angama-2 ngokupheleleyo kwaye inamaqela axhasayo ekuxhaseni ixesha elide ukuhlangabezana neemfuno zabathengi abahlukeneyo kwimveliso yokuphosa (kwizinto ezahlukeneyo kunye nenkqubo yokuphosa), ukutyabeka kunye nokutyabeka umphezulu njl. ..
Ngama-2 amashishini apheleleyo kwaye inani lamaqabane axhasayo ekuxhaseni ixesha elide ahlangabezana neemfuno zabathengi abahlukeneyo kwimveliso yokuphosa (kwizinto ezahlukeneyo kunye nenkqubo yokuphosa), ukutyabeka kunye nokutyabeka umphezulu njl. , Sityala esinye i-RMB yezigidi ezingama-20 ukuphucula amaziko okusekwa. Ngaphezulu kweminyaka engama-30 yeemveliso ezithumela kwamanye amazwe amava / umgangatho ophezulu kunye neqela leQA lobugcisa eliqinileyo / ukuphuhlisa kunye nabathengi kunye ...